होसियार माक्स नलगाई बाहिर निस्किदै हुनुहुुन्छ ? काठमाडौं उपत्यकामा तिर्नुपर्छ एक सय जरिवाना – KhojPatrika
होसियार माक्स नलगाई बाहिर निस्किदै हुनुहुुन्छ ? काठमाडौं उपत्यकामा तिर्नुपर्छ एक सय जरिवाना
By खोज पत्रिका	 July 31, 2020 0
काठमाडौं । राजधानीमा दैनिक कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि माक्स नलगाई बाहिर निष्किनेलाई जरिवाना गर्न थालिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणको हेलचेक्र्याई बढेपछि सरकारले थप कडाई गर्ने रणनिति लिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मास्क नलगाई हिँड्नेलाई ठाउँको ठाउँ एक सय रुपैयाँ जरिवाना गराउन थालेको छ।
मास्क नलगाई हिँडेको पाइए संक्रमण रोग ऐन २०२० को दफा २० बमोजिम एक सय जरिवाना लिन थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । सुरुमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई केही समय होल्ड गरेर सम्झाएर पठाएपनि उलंघनको क्रम नरोकिएपछि कडाई गर्न थालिएको हो । चोक तथा बजारमा धेरैले लापरबाही गरेपछि रसिद नै छापेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । पहिलो लटको एक हजार पत्र रसिद सकिएर अर्को हजारप्रति रसिद प्रहरीलाई दिइएको छ ।
रसिदको नमूना भक्तपुर र ललितपुरलाई पनि पठाइएको छ । सर्वसाधारणले अझै लापरबाही गरे संक्रमण रोग ऐन २०२० अनुसार कैद समेत गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि बाहिर हिँड्डुल गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो ।
त्यस्तै, सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि बाटोमा हिड्दा मास्क अनिवार्य लगाउन अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अटेरी गर्ने २ लाख जनालाई कारबाही गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शुक्रबारसम्म मास्क प्रयोग नगर्ने २ लाख जनालाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए। सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि बाँहिर हिँडडुल गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नु पर्ने नियम लगाएपनि अटेरी बढ्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न ठाउँहरूमा आमसभा भएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि नगर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गरेको छ । लकडाउन खुला भएपछि यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा भिडभाड बढेको छ । भिडभाड नगर्न आग्रह गरेपनि सर्वसाधारणले भने कोरोनाको कुनै मतलव नै गरेको देखिएन । जसका कारण उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम झनै बढेको छ ।
प्रशासन कार्यालय काठमाडौं
रसिद नै छापेर
काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिदैछ गाउँबाट कोरोना, भित्रिनेहरुमध्ये २५ जनामा संक्रमण
इनफ इज इनफको आन्दोलन,बालुवाटारदेखि बसन्तपुर पुग्दा पनि सम्बोधन भएन
By खोज पत्रिका 24 hours ago 0